रोमी र सावनाह मामला अब देखि पति को छ? मार्टिन भिजल्याण्ड
धेरै चीजहरू जुन धेरै नै आलोचना गरिन्छ वा जसरी आधिकारिक व्याख्यानले प्रश्नमा बोलाइएको छ, तपाईंले देख्नुहुन्छ कि उनीहरूलाई छिटो छिटो फालिएको छ। यस रणनीतिले तपाईंलाई कसरी चिन्ता गर्ने बच्चालाई विचलित तुल्याउँछ जस्तो कि यो ध्यान चाहन्छ। तपाईंले मुखमा एक प्यासिफायर राख्नुभयो वा तपाइँ यसलाई एक खिलौना दिनुहुन्छ र बच्चा ठिक छ। जब स्क्रिप्टमा नियन्त्रित योजनाहरू लागेन भने मिडिया स्वाभाविक प्रविधिहरूमा स्वामीहरू हुन्छन्। त्यसपछि तपाईं अन्य विषयहरूको साथ व्याकुलको ख्याल राख्नुहुन्छ। सौभाग्य देखि, त्यहाँ पर्याप्त खतरा थियो र नाटक को चाँडै यो कहानी पृष्ठभूमि मा गायब हो। रोमी र सावनाह को बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ?
Romy र साभान्नाह मा लिपि कुरा (क्रमशः सही र तस्वीर को बाँकी) राष्ट्रलाई केही जवान अपराधीहरूले द्वारा सामाजिक मिडिया प्रयोग मार्फत छ भयानक कारण कि राम्रो विश्वस्त हुने भन्ने विचार को खाता लिन देखिन्छ। लिपि खातामा यो2नै उमेर बालिका थियो, सार्वजनिक ध्यान धेरै लिनुभयो र यसलाई 15 मी को एक अर्धव्यास मा भयो, तर लिपिलाई अन्वेषक सारा कहानी गर्न आएको खातामा लिएनन् संदेह र यसैले धेरै व्यक्तिहरु को कम से कम भावना को चिंतित (कम से कम, मार्टिन व्रिजल्याण्ड को फेसबुक पेज मा प्रसिद्ध ज्ञात सोशल मीडिया ट्रेलहरु को द्वारा ले लिया गया थियो)। लिपि समाजमा झटका लगाउन थालेको थियो। त्यो झटका मोमम 'मा वांछित प्रतिक्रिया थियो।समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान"जसमा लिपि आधारित थियो। यो समस्याले2लडकियों को मौत हो चुके हो र2युवा केटाहरु को लागि माना जाता अपराधी भूमिका को रूप मा। यो स्क्रिप्ट फेरि मेरो मा पढ्नुहोस् अघिल्लो लेख.
यस कथामा उल्लेख गर्न केही उल्लेखनीय चीजहरू छन्। सबै भन्दा पहिले, केटीको अंतिम संस्कार धेरै टाढा थियो। 15 मी को एक अर्धव्यास मा एक समानान्तर हत्या को मामला मा कम्तिमा एक लिंक विचार आयोजित गर्नुपर्छ र यसरी दुवै फेला मृत शरीर डच अदालती संस्थान (NFI) द्वारा जांच गर्नुपर्छ। त्यो थोडा समय लाग्छ। त्यो केहि समय लाग्छ। नतिजाको रूपमा, तपाईंले आफ्नो बच्चालाई जोगाउन पहिले रिश्तेदारलाई पर्खनु पर्दछ। यसैले मजाकहरू धेरै चाँडै बित्यो।
यो अझै पनि उल्लेखनीय थियो कि कथित साइटहरुमा अनुसन्धान पछि कुनै पनि कुतिया पर्खाल मा कुनै क्षति को निशान नहीं पाया गया। पानीबाट पीडित हुनाले पानीको टुक्रामा अनिवार्य अनुसन्धानको साथ गरिनेछ। मेरो अघिल्लो लेख तपाईं एक भिडियो भेट्नुहुनेछ र म बुझ्न चाहन्छु कि त्यहाँ एक खाईको क्षतिको ट्रेस पनि थिएन। प्रश्न तपाईं आफैलाई सोध्न सक्नु भएको प्रश्न हो कि मृत शरीरहरू वास्तवमा फेला परेका छन् वा किनेका छन् र त्यहाँ समाचार-मनोविचार कर्मचारीले केही चित्रहरूको शूटिंग गरेको छ कि छैन। निशान शोध र एक निकाय को हटान को बिना क्षति को बिना नहीं किया जा सकता, जब सम्म तपाईं ट्याप आउन नदिने (तर यो निशान पनि छोड्छ)। मैले सोधें कि प्रश्न (र कुन व्यक्तिले विचार गर्न पनि डराउन सक्दछ) हो: "रोमी र सावनाह मरेका हुन्? के तिनीहरू मारिएका छन्? (र यसैले) तिनीहरू भेटिन्छन्?"
"तपाईं त्यो स्वतन्त्र रूपमा कसरी राख्न सक्नुहुन्छ? त्यहाँ2संदिग्धहरू छन्, जसमा 1 ले पनि घोषणा गरेको छ! यो एक स्पष्ट कुरा हो!"ठीक छ, म सुझाव दिन्छ कि किनकि हामीले यो मीडिया कथाहरु संग गर्नु पर्छ। मेरो अघिल्लो लेखमा मैले कथित अपराधीहरूको नामहरू प्रकाशित गरें। र के अनुमान छ! मैले व्यक्तिगत रूपमा केटाहरूलाई जान्ने व्यक्तिबाट 1 प्रतिक्रिया छैन। कुनै प्रेमीफ्रेन्ड वा गर्लफ्रेन्डहरू छैनन्, कुनै पनि अभिभावकहरू जुन भन्छिन् कि मलाई नामहरू हटाउनु पर्छ। के यो सत्य छैन कि AD.nl प्रकाशित भएको छ कि सावनाहको हत्याको संदिग्धको आमाबाबुले आफ्नो छोराको नाम प्रकाशित गरेको व्यक्तिको विरुद्धमा शिकायत दावी गरेको छ? किन केटाकेटीको ती आमाबाबुले उनीहरूको सामाजिक मिडिया प्रोफाइल हटाउन समस्या पाएनन्? कथासँग आउँदैन कि तिनीहरूसँग यी प्रोफाईलहरूमा पहुँच छैन। यो व्यवस्थित छ जब तपाईं यसमा एक वकील राख्नुहुन्छ र साबित गर्न सक्छ कि यो तपाईंको छोरा चिन्ता छ। के यी मानिसहरू साँच्चै अवस्थित छन्? हामी सुनेका छौं मीडियामा कथाहरू र तिनीहरूका केटाहरू जान्दछन् जुन मानिसहरूका बारेमा कथाहरू। म पनि छोराका नाम रूपमा आए, तर बाउन्स जानकारी किनभने लिपि पक्कै मा आधिकारिक संस्करण लिए जो कसैले भताभुंग भयो बस पनि सजग, नियन्त्रण गर्न सकिएन पारित। यी नामहरु को खुलासा केवल एक पल्ट भएको छ जब मैले भनें कि मान्छे कथित अपराधीहरुलाई जान्दथे। प्रकाशन पछि, मैले कसैलाई सुनेको छु जसले केटाहरू जान्दथे। मिडिया मा कथाहरू केटाहरु मित्र थियो र यति अवस्थित कि छाप दिन मात्र।
मेरो आश्चर्यको लागि, यस हप्ताले मैले वैगेनसनबाट कानुनी फर्म एसजे एडोभेटनबाट ईमेल प्राप्त गरेको छु, श्रीमती एसएस जेजार्डेल्डले भने:
म यो इमेल किन प्रकाशित गर्छु? खैर, मैले तुरुन्तै आश्चर्य गर्थे किन यो वकीलले मेरो विनाशको विरुद्धमा शिकायत दर्ता गरेन? केटाकेटीका आमाबाबुले पहिले नै गर्थे होला? म यो उद्धृत गर्दछु 14 जुनको AD [उद्धरण] केटी सवनाहको मृत्युको सम्बन्धमा पक्राउ गरिएको केटाको आमाबाबुले भ्रामक घोषणा गरेको छ। कसैले आफ्नो फेसबुकको अन्तिम हप्ता फेसबुकमा एक पोष्ट पोस्ट गरे जुन उनी सवेनाह हत्यारा हुन्। यद्यपि फोटो छिट्टै पछि हटाइएको थियो, आमाबाबुले एक रिपोर्ट फाइल गर्न निर्णय गरे। "उनीहरूले संकेत दिन चाहन्छन्। तिनीहरूसँग पनि गोपनीयताको अधिकार छ, "उनीहरूको वकील भन्छन्। आमाबाबुले आफ्नो छोरा न्याय र जनताको विचार गर्न न्यायाधीश सम्म लाग्छ। मैले केवल एक इमेल प्राप्त गरिरहेको छु कि म गोपनीयताको उल्लङ्घन गर्दछु? अनि किन किनकी श्रीमती जिजर्डेल्डले यस संदिग्धको नामलाई आफ्नो ईमेलमा उल्लेख गर्दैनन्? के एक अज्ञात व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेर कानुनी गल्ती गर्न सक्दैन? के यस संदिग्ध (एंजेलो) को सम्पादकको सोशल मिडिया प्रोफाइलको लीक थियो, सम्भवतः स्क्रिप्टको अंश अपराधीको कथा विश्वसनीय बनाउन को लागी? श्रीमती जेजेर्डेल्डले मेरो जवाफको जवाफमा किन प्रतिक्रिया गरेन? किन यस संदिग्धको फोटो र सोशल मिडिया प्रोफाइल अझै अनलाइन थिए? आमाबाबुको कथित घोषणा पछि पनि? के एन्जेलोको आमाबाबुले ईस्वीको अनुसार मानहानि रिपोर्ट गरेनन्? एन्जेलो एक नाबालि छैन? के आमाबाबुले असाइनमेन्ट पाएको छैन?
हामीले देखेका छौं कि सोशल मिडियाले कथित अपराधीहरू र आरोपित पीडितहरूका बीच सम्पर्कमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। के हुन सक्छ कि हामी पुरा तरिकाले एक फिलिम स्क्रिप्ट जस्तै असली जीवन अधिनियम संग लिया जा सकता हो? निस्सन्देह, त्यो एक macabre कार्य हो। जो2लडकियों को हत्या गरिरहेको छ को निश्चय गरदैछ र2जवान केटाहरु अपराधी हुन सक्छन् र पुरा नीदरल्याण्ड को एक हलचल मा अभिनय गरेर को रूप मा राख्छ? अहिले2फौजर्सहरू दृश्यमा कसले राख्छ? त्यो अवस्थित हुन सक्दैन! खैर, जबसम्म कथा एक कहानी संग बनी रहन्छ र हामी यसलाई कुनै प्रमाण संग गर्न पर्छ, हामी भन्न सक्छौं कि यो सम्भव छ। के तपाईंले चित्रमा दु: खी आमाबाबुलाई हेर्नुभयो? रोमीको आमाले मलाई रोमीको अंतिम संस्कारको दिन उनको आईडी कार्ड पठाउनुभयो किन र अर्को दिन रोमीको आइडी कार्ड अर्को दिन गयो? मा यो लेख म कारण र प्रतिक्रिया को वर्णन गर्दछ। तपाईं मान्न सक्नुहुनेछ कि, आमाको रूपमा, तपाईंको मनमा केहि मनपर्यो जस्तै यो क्रियाकलापको समय, त्यसपछि मार्टिन व्रिजल्याण्डलाई ईमेल गरेर। के उनले कथा को विश्वसनीय बनाउनु पर्छ, ताकि म अगाडी बढन सकें?
मेरो अघिल्लो लेखहरूमा मैले पहिले नै एक सम्भावना परिदृश्य पोस्ट गरेको छु जुन सारांशमा स्क्रिप्टको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ:
सम्भावना परिदृश्य (समस्या):
राम्रो तयार भएको होक्स, सहभागीहरू र नकली साथीहरूका लागि जेब पैसा, "आमाबाबु" को लागि जेब पैसा, तैयारीको एक वर्ष यस्तो छ कि केटी क्षेत्रमा परिचित चेहरा (धेरै सामाजिक सञ्जाल गतिविधि)
सम्भावित उद्देश्य (प्रतिक्रिया):
नेदरल्यान्ड्समा सामाजिक असफलता, ठूलो खोजी घृणा र युवा सतावटहरू (जो वास्तविक सतावटहरू होइनन् र हुन सक्थे पनि)
सम्भावित वांछित परिणाम (समाधान):
सोशल मिडियामा गिप; राज्यले सबै कुरामा भाग लिन सक्छ र एक युवा हेरविचार संस्थानको निरीक्षण र पुन-शिक्षिकामा कुनै पनि अपमान छोराछोरी बिना
तिनीहरूले किन त्यसो गर्नु पर्छ / केहि गर्न चाहानुहुन्छ? निकोलोलो मञ्यलेलीको किताब 'इल प्रिन्सिप' अनुसार, ठूलो सामाजिक प्रभाव र जनसंख्यामाथि अधिक नियन्त्रणको साथमा ठूलो लक्ष्य प्राप्त गर्न, तपाईलाई दुर्व्यवहार र छलको साथ पक्राउ गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यस Machiavelli मा नेदरल्यान्डमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मिडिया पुरस्कार छ। एक पल्ट बेक वैटरले त्यो पुरस्कार जिते।
लामो अवधिमा हामी शायद अतिरिक्त पढ्ने मात्र हेर्न सक्नुहुनेछ जसले आधिकारिक पढाइको पुष्टि गर्दछ। तर पहिलो विषय मोर्चामा छापिएको छ। त्यसपछि त्यहाँ समाचार रिपोर्ट हुन सक्नेछ कि संदिग्धहरूले "सिद्ध" अपराधीहरू (बिना प्रमाणीकरण वा अन्य प्रमाणहरू साबित नगरेको) हुन्। 'हत्याका तथ्यहरू' को वर्णनमा, सामाजिक मिडिया सम्पर्क महत्त्वपूर्ण कारक हुनसक्दछ। त्यसपछि हामी एक विधायी प्रस्तावको प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुनेछ सामाजिक सञ्जालमा अधिक नियन्त्रण संग; बच्चाहरु लाई रोकथाम देखि यो प्रकृति को पर्यवेक्षण र संभवतः यहां सम्म कि अधिक विधायी प्रस्तावों को अंतर्गत राखी जान सक्छ। छोटो छ, फेरि फेरि समस्या छ। प्रतिक्रिया (वा बरु छ हुनुपर्दछ) 'जनसंख्या को बीच डरावनी' (विचार को स्वाद संग सोशल मीडिया एक ठूलो खतरा छ) र समाधान अधिक पुलिस राज्य को उपाय मा पाया जान सक्छ। सरकारबाट थप हस्तक्षेप; सरकार द्वारा नागरिकता को गोपनीयता को अधिक उल्लङ्घन।
यस कुराको बारेमा भन्नको लागि त्यहाँ धेरै अधिक छ। उदाहरणका लागि, होभलेकलमा स्थानीय प्रहरी अधिकारीको सोशल मिडियाको संलग्नता थियो। यो जिल्लाको पुलिसले एरिक कुलीनलाई नाम दिएका छन्, मलाई प्रकाशित गरीएको लेखमा अपमान र अपमानजनक आरोप लगाइयो (हेर्नुहोस् यहाँ)। मेरो प्रश्नमा किन मेरो विरुद्ध कुनै घोषणा र स्पष्टीकरणको लागी मेरो अनुरोध (हेर्नुहोस् यहाँ) मेरो प्रतिक्रिया छैन। यस एजेन्टको विरुद्ध पनि एक आधिकारिक रूपमा दायर गरिएको शिकायत (हेर्नुहोस् यहाँ), अझै सम्म प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छैन। त्यसैले एक एजेन्टले केवल सोशल मिडियामा कल गर्न सक्छ जुन मैले दृढता र शंकाको आरोप लगाएको छु। वास्तवमा, सम्पूर्ण वेबसाइटहरू मेरो ठेगानामा अनावश्यक libel को लागि समर्पित र निन्दा गर्न समर्पित छन्। एउटा उजूरी पेश गरेर वा उजूरी दावी गर्दै पुलिस र न्यायपालिकाबाट शून्य प्रतिक्रियाको सामना गर्दछन्। सरकारबाट (हो, अनलाइन सिद्ध भएको मानहानि र निन्दा राज्य कर्मचारी Jeroen उच्च Weij भन्दा कि कुना आउँछ किनभने) मई त्यसैले मेरो व्यक्ति प्रतिबद्ध र केही विरुद्ध baseless मानहानि र निन्दा उजुरी वा लाभ संग हुन्छ। त्यहाँ कुनै प्रतिक्रिया छैन। यस्तो देखिन्छ कि समाजबाट सबै आलोचनालाई रोक्न मात्र एकमात्र रणनीति विधिलाई भरिएको छ: 'दूतलाई मार्नुहोस्'वा: मार्टिन व्रिजल्याण्डलाई सोशल मिडिया र वेबसाइटहरूमार्फत ब्ल्याक गर्नुहोस्।
यो स्पष्ट छ कि धेरै मान्छे को लागि अझै पनि यस सन्दर्भ मा रोमी र सविनाह देखि धेरै प्रश्नहरु छन्। एउटा सर्वेक्षणबाट (तल हेर्नुहोस् यो लेख) 750 पाठकहरू भन्दा अन्यका बीचमा देखाउँछ कि खराब 12% विश्वास गर्दछ कि रोमी र सविनाहको हत्याले एक-अर्कासँग केही गर्न सक्दैन। यस्तो 88% ले पुलिस र मिडियाको आधिकारिक पढाइमा विश्वास गर्दैन। यस देशमा मञ्च्याललीको शिक्षा भनेको के हो? क्या Machiavelli पुरस्कार Hoevelaken र Bunschoten को महापौरहरु या डी Glind मा JH Donnerschool को निदेशक को लागि यस वर्ष जान्छ?
समयको लागि, दुवै हत्या र शंकास्पदहरूको लागि कुनै प्रमाण प्रदान गरिएको छैन। हामी यो कथाहरु र तस्वीरहरु संग गर्छौं। हलिवुडले यो गर्न सक्छ; मिडियाले यो गर्न सक्छ। आम जनता पनि विश्वलाई समझाउन पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ। म फेसबुकमा एक पाठक उद्धरण [बोली] मधेसी बनाउन द्वारा Netflix मा सुपर रोचक डोकू श्रृंखला हेर्नुहोस्! अजीब कसरी अदालत, आटा नक्कली प्रमाण, suspects निर्दोष वर्ष सुरक्षित घोषणाहरूमा लागू गर्न दबाब राखे, झूठ र यति मा प्रहरी अधिकारीहरू जबरजस्ती। कुनै पनि भरोसा गर्न सकिँदैन, भले पनि तिनीहरूले न्यायको लागि काम गर्छन्। तपाईं आफ्नो कथा विश्वसनीय बनाउन प्रमाण सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, यो केवल मीडिया मा रिपोर्ट गर्न सक्छ कि समर्थन को केटीहरु को निकाय मा पाया गएको थियो। यसैले तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणको लागि, कि संदिग्धहरूको डीएनए केटीहरु को निकायहरुमा भेटिन्छ। सबै कसले जाँच गर्न सक्छ? एनएफआई? त्यो हामी मा छ Anass Aouragh मामला 2013 मा, यो स्पष्ट छ कि यो संगठन बिल्कुल विश्वसनीय छैन। आवरण-अपको गन्ध अझै पनि यो अवस्थामा वरिपरि फाँसीरहेको छ। त्यो शायद रोमी र सावन्ना को मामला मा त्यहि रहन हुनेछ।
स्रोत लिङ्क सूची: ad.nl
रोमी नेइभाबर्ग र सावनाह डिकरको भयानक हत्या
किन 'फरक सोच' भनिन्छ खतरनाक विचारको रूपमा अस्वीकृति र योजनागत सोचाइको नेतृत्व गर्दछ
ट्याग: घोषणा, वकील, एजेन्ट, Bunschoten, सतावट, Erik Kluinhaar, विशेष, Hoevelaken, खतरनाक, हत्या, हत्यारे, आमाबाबु, रोमी र सविनाह, Romy Nieuwburg, Savannah Dekker, शर्मिला, संदिग्ध, संदिग्ध, पड़ोस एजेन्सी
म जागिरहेछु लेखे:
23 जून 2017 मा 18: 05
यो शायद मार्टिनको बारेमा होइन। यो मान्छे को हो?
PasOpSmoking Brainwashing लाई रोक्छ लेखे:
23 जून 2017 मा 18: 39
हिलो! र प्रहरी एक पटक पाठ पढ्न धेरै पटक !!
निश्चित ... ..
@Ikbenwakker, म तपाईंलाई बुझ्छ कि यो नकली समाचार हो।
23 जून 2017 मा 19: 16
नहीं, कुनै अभियोजन छैन किनकि यो शायद एक psyopp स्पुफ हो:
24 जून 2017 मा 05: 38
[उद्धरण] "16-वर्षीय संदिग्धका आमाबाबुले एउटा रिपोर्ट गरे, तर आधिकारिक उजुरी फाइल गरेन। यसकारण सार्वजनिक अभियुक्तले यसो भन्छ कि यो मामला बन्द गर्नुपर्दछ। "
उदाहरणका लागि: "हेलो, म तपाईंलाई रिपोर्ट गर्नेछु, तर आधिकारिक उजुरी फाइल नगर्नुहोस्"। त्यसैले तपाइँ एक घोषणा फाइल गर्नुहोस्, तर विशेष गरी उल्लेख गर्नुहोस् कि तपाइँ आधिकारिक उजुरी फाइल गर्नुहुन्न। तपाईं कर रिटर्न फाइल किन गर्नुहुन्छ? खैर, यो यति हो [उद्धरण]: "ओएम अनुसार, आमाबाबुले सिग्नल पठाउन चाहानुहुन्छ कि सबै इन्टरनेटमा राख्न सक्दैन।" उनीहरूले संकेत दिन चाहन्थे कि मान्छेले मात्र सामाजिक सञ्जालमा सबै चीज राख्दैनन्। कस्तो सहानुभूति!
के समस्या र समाधान गोप्य रूपमा हस्तक्षेप गर्ने छैन?
निस्सन्देह, आमाबाबुको रूपमा तपाईं एक गैर-अवस्थित व्यक्ति (वा एक नकली पहिचानको साथ अवस्थित व्यक्ति) को वास्तविक आमाबाबु होइन भने घोषणा गर्न सक्नुहुन्न।
23 जून 2017 मा 18: 09
समाधानलाई बलियो बनाउन।
« समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान: 'ब्रसेल्स अब सड़कों मा सेना को गले लगाएको छ', NRC लाई उल्लिखित
राज्य र मिडियाले दुर्व्यवहार र धोका प्रयोग गर्न सक्छ र मञ्चेल पुरस्कारको साथमा इनाम दिन्छ »
कुल भ्रमण: 4.181.007